Amara Castro Cid. Hurukuro nemunyori weNeizvi uye keke | Current Literature
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 04/11/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 24/10/2021 17:47 | Hurukuro, Vanyori
Kutora mifananidzo: Amara Castro Cid webhusaiti.
Amara Castro Cid, kubva kuVigo, haana kunge ari munyika yezvinyorwa kwenguva yakareba, asi akatowana kubudirira nemabhuku ake akabudiswa kusvika zvino, Nguva yakakwana uye izvi Neizvi uye keke. Mune izvi indavhiyu Anotiudza zvishoma nezvake uye nezvimwe zvakawanda. Ndinokutendai nguva yenyu uye tsitsi.
Amara Castro Cid - Hurukuro
LITERATURE CURRENT: Yako nyowani nyowani yakanzi Neizvi uye keke. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
AMARA CASTRO CID: Neizvi uye keke Ndicho novel yemhuri, ushamwari, rudo nekuvandudzwa. Inyaya yemukadzi wechidiki, Mariana, uyo anodzokera kumusha kwake Vigo kuti apore kubva mumashure e ngozi. Baba vake, vanun'una vake, chiremba wake wepfungwa, physiotherapist wake ... vese vachave vanhu vakakoshera kuporeswa, kwete mumuviri chete asiwo mupfungwa. Dingindira repazasi inzira yekuchema, asi ibhuku rakanaka, nyoro rinoverengwa nekunakidzwa uye iro, maererano nevaverengi, zvikorekedzo kumusoro kubva pakutanga.
Pfungwa iyi yakarova. Ndagara ndichiteerera zvakanyanya kuti kufirwa nomunhu watinoda kunoita kuti tinzwe sei. Icho chinhu icho isu tese tinofanirwa kubata nacho pane imwe nguva uye isu hatina kugadzirira. Chakaita kuti ndiise kushushikana kwangu papepa ndiro rimwe zuva ndakatyora girazi mukitchen kumba. Ndaimufarira nekuti anga aineni hupenyu hwangu hwese, wekupedzisira pavatanhatu, mupukunyuki akasvika pakupera nekuda kwekusaziva kwangu. Ndakaona ndanhonga zvimedu zviya ndichizviisa mumarara. Ndakatsaurira mazwi mashomanana ekutenda kwaari, mariro ose echinhu chiri nyore. Asi zvakanzwa zvakanaka kuzviita, zvakaderedza marwadzo. Ndakatanga kumufunga kurwadziwa kunounza kurasikirwa kana pasina mukana wekuonekana uye panguva iyoyo akaberekwa Neizvi uye keke.
AMC: Ndichiri mudiki ndaiva kurwara kazhinji uye ndinoyeuka ndiri pamubhedha ndine bhuku mumaoko angu kwenguva yakareba sezvandinogona kuyeuka. Chekutanga, ndakatorwa moyo nemuunganidzwa wenyaya, Iyo Miniclassics. Ndokuuya Michael Ende nehunhu hwe Jim Bhatani. Uye sebhuku rakareba. Iyo Wizard yeOz Akashandisa mashiripiti ake pandiri, achindipa kuravira kuverenga kuti ndiende neni kweupenyu hwangu hwese.
Nyaya yandakatanga kunyora handichairangarira. Semwana ndaifarira kunyora uye ndaizviita mazuva ese. Ndakatama kubva kumusha neguta kakawanda muupenyu hwangu hwose uye handichazivi pandakarasa kuona mabhuku angu ouduku. Munguva pfupi yapfuura Ndakawana nyaya nezuva of 1984, kureva, yemakore angu mapfumbamwe. Hazvaigona kuva zvakanyanya cheesy. Vamwe sekuru vakaudza vazukuru vavo nyaya muchoto chaidziya. Pamafafitera paive neburrito, katsi yakapfava kwazvo pamakumbo asekuru, uye, chokwadi, paive naambuya vane rudo vaibika mamuffin kuti vadye.
AMC: Laura Esquivel ndiye anogara ari wekutanga pane rondedzero Semvura yeChocolate, novel yangu yandinofarira; Isabel Allende, kunyanya iya yemabasa ake ekutanga; Rani Manicka, nokuda kwechiratidzo chaakasiya pandiri Mai vemupunga; Susana Lopez Rubio, wandisinganeti kurumbidza; Juan Jose Millás, tenzi wavatenzi; Cristina López Barrio, nesimba rinondibata naro matauriro ake erondedzero; Sunday Villar, hama yangu, munyori akanaka kwazvo wandinoyemura zvikuru; Jose Luis Martin Vigil, nokuti ndakacherechedza uduku hwangu somuverengi; uye handidi kurega kutaura Eloy Moreno, kwete chete nekuda kwemazwi ake asiwo nekuti anga ari chirevo changu mukutsungirira kuzadzisa chiroto chekunyora.
AMC: Ndinoda kusangana Tara westover, munyori uye protagonist we Dzidzo. Kwaizova kukudzwa kugadzira John Brown, wechipiri chimiro che Semvura yeChocolateNaLaura Esquivel.
AMC: Ini handikwanise kuve maniac uye chinhu chakaipisisa ndechekuti izvi zvinowedzera nezera. Ini ndinounganidza ese akajairwa manias evaverengi nevanyori, asi ini ndichakuudza zvishoma zvemunhu. Pandinonyora ini kazhinji ndine Playmobil shoma patafura. Vazhinji vanhu vemunovhero yandiri kushanda pairi, asi ndinoperekedzwawo nevamwe vaviri, Krete neCyprus, vangangoverenga. Pasina ivo handitarise. Kana munhu achida kunditadzisa kurarama chaanofanira kuita kumuvanza anenge akunda hondo yacho.
AMC: Hapana nguva iri nani kwandiri kupfuura mana kana mashanu mangwanani, apo vose vanyarara. Ramba uchifunga izvozvo Ndinogara mumugwagwa wevanofamba netsoka, iyo inonyanya kutengeserana muVigo, uye hazvisi nyore kutarisisa nemuimbi weopera pasi pehwindo rako uye kana akakusiya ukatora mukana wekudzikama, iva nechokwadi chekuti gitare, mupimbi kana muimbi-munyori wenziyo achasvika munguva pfupi. Kana pasina munhu ane ma decibel akazara, imhaka yekuti kuratidzira, parade yave kuda kupfuura kana kuti yave nguva yekuenda kubatidzwa kwemwenje weKisimusi. Maraibhurari ndiwo aiva utiziro hwangu, asi handikwanise kushanda nemask. Ndinovimba kudzoka nekukurumidza.
Uye nzvimbo yakakosha kwandinoda kunyora ndiyo dura reimba yevabereki vangu. Ndakaiisa sehofisi yezhizha uye inzvimbo inonakidza kunyora.
AMC: Ndinoda kuenda marudzi akasiyana in the Kuverenga. Panguva yekunyora, nepfungwa yekutsikisa, ini ndakavimbika kune yangu nekuda kweiyo ye "shoemaker, kune shangu dzako", asi ini zvakare ndinochengeta zvishoma zvakavanzika mudhirowa. Ndiani anoziva kana rimwe zuva ...?
AMC: Ndiri kuverenga Hanzvadzi yakarasika, ivo Lucinda riley. Ibhuku rechinomwe munyaya ye Hanzvadzi nomwe. Ndakavada vese. Izvi ndakazviverenga ndiine bundu pahuro nekuti munyori akatisiya gore rino nekuda kwegomarara. Mudzimai wechidiki, ane basa rakanaka uye nezvakawanda zvekutaura… Handitende kuti iyi ichave nyaya yekupedzisira yandaverenga naLucinda Riley, ndosaka ndiri kuedza kufamba zvishoma nezvishoma, handidi kuti zvidaro. pererwa.
Yakave nguva yakareba kubva ipapo Ndatanga kunyora novel rangu rechitatu. Parizvino Handikwanise kuburitsa zvakawandaNdichangokuudza kuti mutambi mukuru anonzi Rita uye zvakare yakaiswa mukati Galicia, semanovhero angu apfuura. Am kufara zvikuru Nechirongwa ichi, kunyangwe dzimwe nguva ndichibatwa nepfungwa yekusasvika pabasa, zvakanyanya nekuti ndiri munhu uye, nekudaro, ndine kutya kwakajairika kungava nemumwe munhu. Sezvineiwo, handisi mukumhanya-mhanya. Ndiri kufarira chikamu chese chemaitiro uye ndinofarira kufamba ndiri pachangu.
AMC: Ndakatanga se akazvinyora munyori muna 2017. Ndinonzwisisa kuti denda rakawedzera zvakanyanya nzira iyi yekutanga basa kuti rivheneke, asi panguva iyoyo, takanga tisina vazhinji vedu uye zvakafamba zvakanaka titanic kuedza Ko ndaigoita sei promotion. Zvisinei, ndaiziva kuti iyi yakanga isiri nzira yandaida kufamba nayo, uye nebhuku rechipiri, ndakanga ndawedzera kuzvidzora. Zuva iro Maeva akabvumira chinyorwa changu ndichagara ndichichirangarira sechimwe chemufaro mukurusa muupenyu hwangu. Ikozvino ndave chaipo pandaida. Iwe haugone kukumbira zvimwe.
AMC: Ini ndinofunga kuti, kusvika pamwero mukuru kana mudiki, isu tese takasiyana, takasiyana nezvataive pamberi pedenda. Ini pachangu, Ndichiri kuona zvakandiomera kujaira kubva pamba zvakare. Ngatitii ndichiri kutambura nekuvharika kwepfungwa, zvese zvinoita kunge zviri kure kwazvo kwandiri. Uye ndinobuda, hongu, asi ndinozviita nekuedza. Iniwo ndave kutadza kuona hurongwa hwenhau pasina misodzi inobuda mumaziso angu. Ndinofungidzira zvese izvi zvichasiya mucherechedzo wayo pane ramangwana nyaya, hazvidzivisike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Amara Castro Cid. Hurukuro nemunyori weNaizvozvi uye keke